Ama-Anabolics ama-Steroid powder series-suppliers - i-AASraw powder
/ iimveliso / Anabolics Steroids
I-Anabolic steroids powder, i-anabolic-androgenic steroids (AAS), iyingqungquthela yokwenziwa kwe-hormone ye-testosterone yesini. Ixesha elifanelekileyo lala ma-compounds yi-anabolic-androgenic steroids. "I-Anabolic" ibhekisela kwisakhiwo semisipha, kwaye "kunye ne-androgenic" ibhekisela kwimpawu zesini zesini. Amanye amagama aqhelekileyo kwi-Anabolic steroids powder yiGear, Juice, Roids, kunye ne-Stackers.
Abanye abantu baxhatshaza i-Anabolic steroids ipowder ukuphucula ukubonakala kwabo.
Abanikezeli benonophelo lwempilo banokumisela i-steroids ukunyanga imiba ye-hormonal, njengokubambezeleka kokusasa. I-Steroids inokuphinda iphathe izifo ezibangelwa ukulahleka kwemisipha, njengomhlaza kunye ne-AIDS. Kodwa abanye abagijimi kunye nabakhi bomzimba bawasebenzisa kakubi ezi zi yobisi ukuphucula ukusebenza okanye ukuphucula ukubonakala kwazo.
Imingcipheko yempilo inokuveliswa ngokusetyenziswa kwexesha elide okanye ukulingana ngokweqile kwe-AAS. Ezi ziphumo ziquka utshintsho olunobungozi kumanqanaba e-cholesterol (ukunyuka kwe-lipoprostin ephantsi kunye nokunciphisa i-lipoprotein ephezulu), i-acne, ukunyuka kwengcinezelo yegazi, ukulimala kwesibindi (ikakhulukazi kunye ne-AAS yomlomo wonke), kunye nezinguqu ezinobungozi kwisakhiwo se-ventricle yekhohlo ntliziyo. Imiqathango ephathelele ukungalingani kwe-hormonal ezifana ne-gynecomastia kunye nokunciphisa ubukhulu be-testicular nako kubangelwa yi-AAS. Kuyabasetyhini nabantwana, i-AAS ingabangela ukuba umntu angabikho.
I-Ergogenic isebenzisa i-AAS kwimidlalo, ukugijima, kunye nokwakhiwa komzimba njengezidakamizwa eziphucula ukusebenza ngenxa yeempembelelo ezimbi kunye nokukwazi ukufumana inzuzo engalunganga kwimincintiswano yomzimba. Ukusetyenziswa kwabo kuthethwa ngokuba yi-doping kwaye ivinjelwe ngamagosa amakhulu emidlalo. Kwiminyaka emininzi, i-AAS ibe yizona zinto zifunyenwe kakhulu kwi-laboratory i-IOC. Kwamazwe apho i-AAS ilawulwa khona izinto, kukho imarike emnyama ekuthengwa ngayo ngokungasetyenziswanga, ngokucatshulwa ngokugqithisileyo okanye kunye neziyobisi ezikhohlisayo zithengiswa kubasebenzisi.
Abasebenzisi abaninzi be-steroid abadlali. Phakathi kwe-1 yezigidi kunye nabantu abayi-3 yezigidi (1% yabemi) bacingelwa ukuba basebenzise i-AAS e-United States. Izifundo eUnited States zibonise ukuba abasebenzisi be-AAS bavame ukuba ngabangama-middle-class amadoda angama-sexually-sexual age of age XMUMX abangabanelungelo lomzimba kunye nabangewona umdlalo kwaye basebenzise iziyobisi ngeenjongo zokuzilungisa. "Phakathi kwamakhwenkwe akwa-25- ku-12 ubudala, ukusebenzisa i-steroids kunye nezidakamizwa ezifanayo kwathatha ipesenti ze-17 ukusuka kwi-25 ukuya kwi-1999, kunye neepesenti ze-2000 zithi zizisebenzisela ukubukeka kunezemidlalo, isifundo se-Blue Cross Blue Shield." (Eisenhauer) Olunye uphando lufumene ukuba ukusebenzisa kwe-AAS engekho unyango phakathi kwabafundi beekholeji kwakungaphantsi kwe-20%. Ngokwenzululwazi yakutshanje, i-1% yabasebenzisi be-steroid babengabanelungelo lokuvuselela umzimba kunye nabangewona umdlali, ngelixa i-78.4% ibhengeze i-injection injection njengeendlela zokusebenzisa izilingo, ukwabelana ngamasilane kunye nokwabelana ngezibilini ezininzi, nangona uphando lwe-13 lufumene ukuba ukwabelana kweenaliti okuqhelekileyo phakathi kwabantu abasebenzisa i-AAS ngenjongo yokungenanto, ngaphantsi kwe-2007%. Olunye uphando lwe-1 lufumene ukuba i-2007% yabasebenzisi be-AAS abangenazo zonyango banee-degrees ezisekondari kwaye abaninzi baye bagqiba iikholeji kwaye bambalwa abahlulekile ukugqiba isikolo esiphakamileyo kunokuba kulindeleke kubantu abaqhelekileyo. Uphononongo olufanayo lufumene ukuba abantu abasebenzisa i-AAS ngeenjongo ezingezizo zonyango babe nezinga eliphezulu lokuqeshwa kunye nomvuzo ophezulu wendlu kunabantu bonke. Abasebenzisi be-AAS bavame ukuphanda izilwanyana abazithatha ngaphezu kwamanye abasebenzisi bokusetyenziswa kweziyobisi; Nangona kunjalo, imithombo ephambili edibeneyo nabasebenzisi be-steroid ibandakanya abahlobo, iincwadi ezingezizo zonyango, iifom ye-intanethi, iiblogi kunye namagqabini omzimba, onokunikela ngolwazi olungathandabuzekiyo okanye oluchanekileyo.
Ukusetyenziswa kakubi kwabantu Anabolic steroids powder?
Abantu abasebenzisa kakubi i-Anabolic steroids powder ngokuqhelekileyo bawathatha ngomlomo okanye bawafake kwiimisipha. Ezi ziko zingaba yi-10 kumaxesha e-100 aphezulu kunamanani axelwe ukunyanga iimeko zonyango. I-Steroids isetyenziswa kwesikhumba njengekrimu, i-gel, okanye i-patch.
Abanye abagijimi kunye nabanye abasebenzisa kakubi i-steroids bakholelwa ukuba banokuphepha iziphumo ezingamfunekiyo okanye ukuphucula iziphumo zamachiza ngokuzithatha ngeendlela ezibandakanya:
amayeza okuthatha ibhasi ngexesha elithile, ukuyeka ixesha, kwaye uqale kwakhona
ukuxakisha-ukuhlanganisa ezimbini okanye iintlobo ezahlukeneyo ze-steroids
i-pyramiding-ukwandisa ngokukhawuleza umthamo okanye ukusetyenziswa kakubi kokusetyenziswa kakubi, kufinyelela kwisixa esiphezulu, kwaye ngokukhawuleza ugqithise
I-Anabolic-androgenic steroids (i-AAS) iinguqulelo zokwenziwa kwe testosterone ye-hormone kwaye zinezonyango ezisemthethweni zonyango. Xa imiselwe ngokomthetho kwaye ilawulwa ngumboneleli wezonyango, i-Anabolic steroids powder ithathwa njengempilo ekhuselekileyo kunye neyeza.
Nangona kunjalo, uninzi lwalolu hlobo lweziyobisi luphakathi kwabakhi bomzimba kunye nabagijimi ukuze kuphuculwe amandla okanye imbonakalo yazo. Ukusetyenziswa kakubi kakubi kwe-AAS kunokukhokelela kwimiphumo engathintekiyo yempilo kunye neyezinye iimeko ezingenakuguquka, kuquka ukuhlaselwa kwentliziyo, ukuphazamiseka, ukuxinezeleka nokuziphatha kakubi.
Zama ukusebenzisa i-AAS kwiinkampani ezifanelekileyo zithetha ukuthatha i-AAS esemgangathweni yezinto eziphathekayo, upheke i-AAS tablet / capsule okanye ioli ejoyiweyo phantsi kweemeko eziqinileyo iya kuzisa impilo yakho ingozi.
Ukubonisa 1-8 kweziphumo 46